SPH800 Hydraulic butt anọ na ịgbado ọkụ igwe - China Ningbo Sunplast Pipe
SPH800 Hydraulic n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine, dị ịgbado ọkụ nha si dn630-800mm, elu àgwà ekwesị na 1 afọ, inogide ọrụ oge, asọmpi na n'ùkwù ahịa, na ngwaahịa dị & n'oge nnyefe dị. Kpọtụrụ anyị maka nkọwa ndị ọzọ!
isi anọ na ịgbado ọkụ bụ ndị kasị ewu ewu ịgbado ọkụ usoro HDPE piping usoro, na butt anọ na ịgbado ọkụ ígwè bụ ihe ulo oru igwe nke a na ọtụtụ choro maka ịgbado ọkụ na nzube.
The SPH800 Hydraulic butt anọ na ịgbado ọkụ igwe na-mere nke ise n'akụkụ, gụnyere: planing ngwaọrụ, kpo oku efere, isi etiti, voltaji akara kabinet & haịdrọlik unit. Lee n'okpuru foto nke Ọdịdị:
SPH800 Hydraulic isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
Ịgbado ọkụ nso: 630mm, 710mm, 800mm
Mbukota size: 186 * 135 * 135 cm 136 * 76 * 187cm 83 60 * 56cm
Total Volume: 5.8m³ Arọ: 1045kgs Gross arọ: 1220kgs
Bastic ụba Heating efere Planing Ngwá Ọrụ nkata Hydraulic Unit
size 175 * 130 * 128 cm 98 10 * 104 cm 97 36 * 150cm 81 * 67 * 90 cm 74 * 50 * 47 cm
ibu 670kgs 61kgs 203kgs 48kgs 53kgs
Previous: SPL160-4M Manual n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
Osote: SPH630 Hydraulic n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
160-315mm HDPE Pipe ịgbado ọkụ Machine
160-315mm Hydraulic n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
160mm HDPE n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
160mm HDPE Pipe ịgbado ọkụ Machine
63-160mm Hdpe Pipe ịgbado ọkụ Machine
63-160mm Hydraulic Hdpe Joint ịgbado ọkụ Machine
800mm HDPE Pipe ịgbado ọkụ Machine
isi Fusion Machine
isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
isi ịgbado ọkụ Machine
HDPE n'isi Fusion Machine
HDPE n'isi ịgbado ọkụ Machine
HDPE Pipe n'isi ịgbado ọkụ Machine
Pee Pipe n'isi ịgbado ọkụ Machine
Polypipe n'isi ịgbado ọkụ Machine
SPH160 Hydraulic n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
SPH200 Hydraulic n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
SPH250 Hydraulic n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine
SPH315 Hydraulic butt anọ na ịgbado ọkụ igwe
SPH450 Hydraulic butt anọ na ịgbado ọkụ igwe
SPH630 Hydraulic n'isi Fusion ịgbado ọkụ Machine